နိုဝင်ဘာလအတွင်း မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပမယ့် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း နိုဝင်ဘာလအတွင်း မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပမယ့် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
နိုဝင်ဘာလအတွင်း မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပမယ့် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းဟာ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကိုတာတာမျိုးနဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ Pre Wedding ရိုက်ကူးမှုတွေကို အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ဥရောပမှာ လုပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ပုဂံဒေသတွေမှာ ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးသဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးတာကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ချောင်းသာကမ်းခြေမှာ ပြုလုပ်သွားမှာပါ။
လက်ရှိအနုပညာလုပ်ရှားမှုတွေ အနေနဲ့ကတော့ ပင်လယ်လုပွဲ ရုပ်ရှင်ဇတ်ကား ရိုက်ကူးထားပြီး သီချင်းဆိုဖို့နဲ့ ခရီးထွက်ဖို့တွေလည်း ရှိနေသေးတယ်လို့ နန်းမြတ်ဖြိ်ုးသင်းက ပြောပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အရင်ထက်ပိုပြီး ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
………………………. ။ ။ ……………………….
နိုဝငျဘာလအတှငျး မင်ျဂလာပှဲ ကငျြးပမယျ့ နနျးမွတျဖွိုးသငျး
ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုတှကေို ရရှိထားတဲ့ ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုသရုပျဆောငျ နနျးမွတျဖွိုးသငျးဟာ လာမယျ့ နိုဝငျဘာလအတှငျး ကိုတာတာမြိုးနဲ့ လကျထပျထိမျးမွားတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ Pre Wedding ရိုကျကူးမှုတှကေို အီတလီ၊ ပွငျသဈ၊ ဥရောပမှာ လုပျခဲ့ပွီး မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ ရှမျးပွညျနယျနဲ့ ပုဂံဒသေတှမှော ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။ နှဈဦးသဘောတူ လကျမှတျရေးထိုးတာကိုတော့ နိုဝငျဘာလ ၉ ရကျနေ့ ခြောငျးသာကမျးခွမှော ပွုလုပျသှားမှာပါ။
လကျရှိအနုပညာလုပျရှားမှုတှေ အနနေဲ့ကတော့ ပငျလယျလုပှဲ ရုပျရှငျဇတျကား ရိုကျကူးထားပွီး သီခငျြးဆိုဖို့နဲ့ ခရီးထှကျဖို့တှလေညျး ရှိနသေေးတယျလို့ နနျးမွတျဖျွိုးသငျးက ပွောပါတယျ။ ဆကျလကျပွီးတော့လညျး အနုပညာ လှုပျရှားမှုတှကေို အရငျထကျပိုပွီး ကွိုးစားလုပျကိုငျသှားမှာ ဖွဈတယျလို့ ပရိသတျတှကေို အသိပေးလိုကျပါတယျ။
Previous articleလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို လယ်သိမ်းခံတောင်သူတွေ ကန့်ကွက် (ရုပ်/သံ)
Next article ဟာရီကိန်းကို ခေါ်ဖို့ ရီးရဲမက်ဒရစ်နဲ့ အပြိုင် မန်ယူ ကြိုးပမ်းမယ်